Ronaldo oo rikoor cusub sameeyay - iftineducation.com
Ronaldo oo rikoor cusub sameeyay
aadan21 / December 8, 2014
iftineducation.com – Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa sameeyay laba rikoor oo cusub, kaddib markii uu ku hogaamiyay kooxdiisa Real Madrid inay la simato rikoorkii ay kooxda Barcelona haysatay ee ahaa inay badisay 18 kulan oo xiriir ah ee dhammaan tartamadii ay dheeshay.
Weeraryahankan u dhashay waddanka Portugal ayaa dhaliyay saddex gool ciyaartii ay kooxiisa 3 -0 uga adkaatay kooxda Celta de Vigo, iyadoo Ronaldo uu noqday ciyaaryahanka ugu badan ee dhaliyay saddex gool hal ciyaar, kaddib markii uu dhaliyay markii 23-aad taariikhda horyaalka Spain ee La Liga.
Ciyaaryahanka ayaa sidoo kale gaaray 200 oo gool oo uu kooxdiisa Real Madrid u dhaliyay horyaalka Spain 178 kulan oo uu u saftay.
Ronaldo, oo ah ciyaaryahanka ugu cad cad inuu ku guulaysto bilidda Ballon d’Or ee la gudoonsiiyo ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida ee sanadkan 2014-ka – ciyaaraha uu soo bandhigay awadeed – ayaa loo istaagay markii la badalay dhamaadka ciyaarta si loo xuso rikoorka uu sameeyay.
29 jirkan ayaa horay ula sintay rikoor ah tirada goolal saddex ah oo hal ciyaar la dhaliyo oo ay sameeyeen weeraryahannadii afka hore kaga dheeli jiray kooxda Real Madrid, Alfredo Di Stefano, iyo Telmo Zarra oo u dheeli jiray kooxda Athletic Bilbao, iyadoo gool dhalintooda uu ku dhaafay diib uu usoo dhigay Marcelo oo uu shabaqa ku hubsaday.
Ciyaaryahanada ugu gool dhalinta badan guud ahaan horyaalka La Liga:
Ciyaaryahanka Goolasha Kooxda ama kooxaha Sanadka
Lionel Messi 253 Barcelona 2004-ilaa hadda
Telmo Zarra 251 Athletic Bilbao 1940-1955
Hugo Sanchez 234 Atletico Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano 1981-1994
Raul 228 Real Madrid 1994-2010
Alfredo di Stefano 227 Real Madrid 1953-1966
Cesar Rodriguez 223 Barcelona, Granada 1939-1955
Quini 219 Sporting Gijon, Barcelona 1970-1987
Pahino 210 Celta Vigo, Real Madrid, Deportivo, Granada 1943-1956
Cristiano Ronaldo 200 Real Madrid 2009-ilaa hadda
Edmundo Suarez 195 Valencia 1939-1950
Walee fanaanad ayaa noo soo baxday Ee Daawo
Gabar Howl kar ah Oo Muqisho wax lagu farxo ka sameysay -Daawo